Sidee looga saaraa xargaha kabaha: tilmaamaha iyo tilmaamaha lagu joojinayo xanuunka | Ragga Stylish
In ka badan hal jeer waad necbayd inaad sameyso jimicsi xoog leh (iyo in ka badan haddii loo baahdo kasbashada muruqyada) ee adkaanta xanuunka leh taas oo hadhow soo baxda. Madax adaygu waa natiijada ka timaadda xad-dhaaf ah lactic acid muruqyadaada ka dhalatay jimicsi jireed awgeed. Si looga hortago waxa ay wajaheyso, muruqa ayaa qarsoodi ah lactic acid kaas oo u oggolaanaya inuu ka adkaado dadaalka. Si kastaba ha noqotee, waxay ku xanuunsaneysaa qaabka xargaha kabaha.
Haddii nabarro kaa soo gaadhaan oo aad rabto inaad barato sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah looga saaro, akhri. Qoraalkan waxaad ka heli kartaa tilmaamaha ugu fiican ee aad ku nafiso sida ugu dhakhsaha badan.
1 Qaar khuraafaad ku saabsan ka saarista xargaha kabaha
2 Sidee looga saaraa xargaha kabaha iyadoo ku saleysan xanuun
2.1 Xanuun fudud
2.2 Xanuun dhexdhexaad ah
2.3 Xanuun badan
3 Talooyinka qaarkood
Qaar khuraafaad ku saabsan ka saarista xargaha kabaha
Hadda waxaa la joogaa xilliga xagaaga ee aad wax badan u baxdo, ka faa'iideyso si aad u sameyso isboorti oo aad u gubto kalooriyadaas oo aad u dhalaasho dufanka. Aad ayey ugu habboon tahay in jimicsi lagu sameeyo taariikhaha tan iyo, iyadoo heer kulka sare uu jiro, waxaan gubnaa tamar badan. Si kastaba ha noqotee, xargaha kabaha ayaa naga dhigi kara inaan soo marno dhibaatooyin daran. Waa suurtagal inaan ku adkaano la qabsiga jimicsiga haddii xanuunku noqdo mid waara oo xanuun leh.
Xaaladahan oo kale, waxaa jira dad badan oo bixiya qaar ka mid ah daaweynta guriga oo looga hortago xanuunka iyada oo aan la ogeyn. Mid baa caan ku ah ahaansho biyaha sonkorta caanka ah. Waxaa maskaxda lagu hayaa in jimicsiga ka dib, cabitaanka koob biyo ah oo sonkor ah ay baabiin karto muuqaalka xanuunka. Tan waxaa loo yidhi maxaa yeelay si fiican looma oga waxa ay yihiin.
Nabarradu waa dhaawacyo yaryar oo ka dhaca muruqyada oo ku bogsada cunno wanaagsan. Quudintu waxay sababtaa fiilooyinka burburay inay dib u dhisaan. Intaas waxaa sii dheer, way fiicantahay in murqaha lasiiyo xoogaa nasasho ah si soo kabashada ay sax u noqoto. Waxaa jira talooyin qaar oo kuxiran xoojinta xargaha kabaha.
Waxaa jira heerar kala duwan oo xanuun xanuun ah. Haddii aynaan rabin inay soo muuqdaan, waa inaan taxaddar qaadannaa. Tallaabooyinka ka-hortagga waxay ku saleysan yihiin ku samee jimicsiga si habsami leh oo tartiib tartiib ah. Faa'iido malahan in lagado laadadka jimicsiga haddii aan usbuucii hadhay sariirta kusii jiri doonno xanuunka dartiis. Haddii aan jimicsiga u qaadanno si deggan, waxaan siin doonaa jirka fursad uu kula qabsado dadaalka. Waxa kale oo lagugula talinayaa inaad si habboon u waraabisid oo aad u cunto cunno fiican. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad muruqyadaada ku hayso qaabka ugu wanaagsan ee suuragalka ah.
Sidee looga saaraa xargaha kabaha iyadoo ku saleysan xanuun
Had iyo jeer waa inaan iska ilaalin qallafsanaan. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer macquul maahan. Markaan waqti dheer soconno oo aan jimicsi sameynin oo aan dib ugu laabanno rarka, jirkeennu waa dhibban yahay. Qaadashada oo dhan si fudud ayaa naga caawin doonta inaan ka dhigno kuwo fudud. Haddii aynaan awoodin inaan ka hortagno in xargaha kabaha ay soo baxaan oo ay si fudud u xanuunayaan, waa inaad wax ka qabataa.
Waxa ugu horreeya waa in la ogaado nooca xargaha kabaha ay yihiin. Kuwa jilicsan ayaa ah kuwa ugu caansan oo aan xitaa ku sii wadno tababarka. Madax adayggan ayaa inbadan inaga xadeeya markaan tababareyno koox kale oo muruq ah, xitaa haddii aanaan ogaanin. Haddii aan rabno inaan soo afjarno xargaha kabahaas, biyo kulul waa in loo adeegsadaa aagga ay dhibaatadu saameysey. Waa inaan ku xoqnaa oo ku duugnaa aagga ay dhibaatadu saameysey biyo kulul si loo dardargeliyo loona wanaajiyo socodka dhiigga. Sidan ayaan ku gaari doonnaa natiijooyin wanaagsan iyo soo kabasho wanaagsan. Markii aan ku laabanno jimicsiga jilicsanaan jilicsan, jiilka adrenaline wuxuu naga caawinayaa inaan si ku meelgaar ah u joojino xanuunka. Tani waa sababta kabaha kabaha loogu sheego inay ku xirmaan jimicsi badan.
Xanuun dhexdhexaad ah
Marka xanuunku dhexdhexaad yahay, xanuunku wuxuu u eg yahay inuu sidoo kale saaxiib yeesho caabuq muruqa ah. Xaaladdan oo kale waxaa ugu wanaagsan inaan nafteena ku dadaalno kareem anti-bararka. Qaybta ay dhibaatadu saameysey waa in si wanaagsan loogu masaajeeyaa kareemka si loo kiciyo socodka dhiigga. Waxay naga caawin doontaa inaan horumarino soo kabashada isla markaana yareynno xanuunka xoogaa.
Haddii aan ku darno biyo kulul saliidaha lagama maarmaanka ah iyo udugga, waxay naga caawin doontaa inaan si dhakhso leh u soo kabanno. Faa'iidooyinka ay dhaqammadani ina siinayaan waa dhowr. Intaas waxaa sii dheer, socodka dhiigga ayaa la kiciyaa, waxaan heli doonnaa saameyn nasasho badan waana deganaan doonnaa sida ugu dhakhsaha badan.
Haddii xanuunka aan qabno uu aad u sarreeyo, hubaal xitaa ma dhaqaaqi karno. Tani waxay badanaa dhacdaa marka dadka fadhiga badan ay lugeeyaan wadada adag. Maalinta ku xigta sariirta kama dhaqaaqi karaan. Markay tani dhacdo, murqaha murqaha jidhkeennu aad buu u sarreeyaa. Haddii aan rabno inaan caafimaadkeenna dib u soo ceshanno, waa inaan joojinnaa sameynta dhaqdhaqaaqa jireed oo aan diirada saarnaa ka bogsashada xanuunka.
Xanuun baabi’iye waxay naga caawin kartaa inaan xanuunka yareyno oo aan markaa dhaqaaqno. Waxaan sidoo kale ku xoojin karnaa saameynta biyo qabow. Kahor intaadan ku furin tuubada biyo qabow, waxaan qaadan doonaa qubeys kulul. Mar alla markii aan dhammeyno, waxaan fureynaa tuubada qabow, sidaa darteed kala duwanaanta heerkulka ayaa naga caawineysa hagaajinta wareegga dhiigga.
Tilmaamahan ayaa naga caawin doona inaan dhaqaajino wareegga iyo hagaajinta soo kabashada. Gudaha waxaan ku biirin karnaa hagaajinta jirkeena qaadashada cuntooyinka hodanka ku ah magnesium. Cunsurkaan waxaa muruqyadeenu u adeegsadaan inay ku noqdaan xaaladdooda caadiga ah Sidoo kale, helitaanka cunto kaladuwan oo hodan ku ah fiitamiinnada iyo macdanta ayaa ka dhigi kara iyaga fudud.
Aad ayey muhiim u tahay inaan tixgalino dhamaan tilmaamahan markaan ku laabaneyno muruqyadeena xaaladooda caadiga ah ee aan ku qabanno jimicsi daran. Markuu waqtigu idlaado, jimicsi ayaan ula qabsan doonnaa markale.
Haddii, tusaale ahaan, aan ku jirno culeyska jirdhiska oo aan si joogto ah wax uga beddeleyno jadwalka si loo hagaajiyo tababarka, waa inaan ogaanno inaan si joogto ah u adkaan doonno. Tani waa dhaqan si weyn loo isticmaalo si loo siiyo murugo badan murqaha oo ay ka dhigaan koritaankooda in la xoojiyo.
Markaan ka soo laabanno waqti aan jimicsi sameyn, waa inaan ogaano inaynaan dhaafi karin. Kama fikiri karno inaan mar kale isla culeyska kor u qaadno mana sameynno isla jimicsi jimicsi ah oo aan horey u sameyn jirnay. Haddii aan iska indhatirno talooyinkan, waxay u badan tahay inaan ku xanuunno madax adayg intaas le'eg.
Waxaan rajaynayaa inay tani kaa caawinayso inaad dib ugu soo laabato jimicsiga oo aadan maalmahaaga ku qaadanayn inaad sariirta la seexato xanuun. Adoo raacaya talooyinkan waxaad ka saari kartaa xargaha kabaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Sida looga saaro xargaha kabaha